Somali-Canadian uu dhalay Ganacsade Caan ahaa oo xalay lagu dhax dilay Masaajid kuyaala Muqdisho +Sawirkiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
28th March 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Kooxo bistoolado ku hubeesan ayaa xalay Masaajid lagu magacaabo Ummaga oo kuyaala degmada Hilwaa waxa ay ku dhax dileen muwaadin Somali-Canadian ah uu dhalay ganacsade dalka Caan ka ahaa.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in dhalinyaro Bistoolado ku hubeesan ay gudaha Masjidka ugu soo galeen kadibna ku dhax dileen Sade Mahad Dirir , oo 40-sano jir ahaa , waxaana la sheegay in xiliga la dilayay uu ku mashquulsanaa aqrinta Kitaabka Quraanka Kariimka.
Kooxihii dilka geestay ayaa durba baxsaday, waxaana daqiiqado kadib masjidka uu dilku ka dhacay soo gaaray ciidamo katirsan booliiska iyo Nabad Sugida kuwaa oo halkaasi ka sameeyay baaritaano aan natiijo kasoo bixin.
Marxuunka la dilay waxaa dhalay Ganacsade dalka Caan ka ahaa oo la oran jiray Mahad Dirir Guuleed , waxaana marxuunka la dilay la sheegay in uu kiro ka qaadi jiray Guri uu degnaa Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Muungaab .
Dilalka ka dhax dhaca Goobaha Cibaadada sida Masaajida ayaa mudooyinkii dambe ku yaraa magaalada Muqdisho, waxa ayna dadka MUqdisho arintan ku tilmaameen mid laga axumaado in dadka hadana lagu ugaarsado goobaha cibaadada.